पीडितहरुको घाउमा मलम लगाऊ – Chitwan Post
असार तेसो सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानका कारण तराई मधेसमा हजारौँ जनता पीडित भए । दुःख र पीडा मिसिएको यस विषम समयमा पीडित जनताको अवस्था बुझ्ने, उनीहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने र छिटोभन्दा छिटो राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको हुन्छ । जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने पनि यस्तै बेलामा हो । विपद्ले तहसनहस पारेका बखत पाएको साथ र सहयोग मानिसले जीवनभर भुल्न सक्दैन । तर, यस्तो समयमा पीडितको पीडामा मलम लगाउन सकिएन भने सरकार रहनु÷नरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । तराईमा हजारौँ जनता बिचल्लीमा परेको खबर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहँदा सरकारी पक्षबाट भने औपचारिकता निर्वाह गरेको देखिएको छ । अहिले सरकारी टोलीले बाढी तथा डुबान प्रभावित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी टोलीले बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रका पीडित पक्षसँग भेटेर उनीहरुको समस्या नै नबुझी जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटेर फर्किएपछि स्थलगत निरीक्षणबारे सवाल उठेको हो ।
स्थलगत निरीक्षण भनेको हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति नियाल्नुमात्र होइन । प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्न, पीडितहरुको राहतका लागि आकस्मिक निर्णय गर्न यस्तो औपचारिकता प्रभावकारी हुन सक्दैन । बाढी तथा डुबान क्षेत्रहरुमा स्थलगत निरीक्षण गर्नु मजाक होइन । यो विपद्ले निम्त्याएको आकस्मिक अवस्था हो । यस्तो संवेदनशील समयमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या राज्यका निकायमा राख्न पाउनुपर्छ । तर, विडम्बना ! गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र नेताहरुको जम्बो टोलीले हेलिकप्टरबाट तराई मधेसका बाढी प्रभावित केही स्थानको हवाई निरीक्षण गरेर फर्कियो । पीडित परिवारले सरकारी उच्चस्तरीय टोलीले आफूहरुसँग भेट नगरेको र आफ्नो समस्या सुनाउन नपाएको गुनासो पोखे । पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीलगायतको जम्बो टोली बाढी तथा डुबानबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको जिल्ला रौतहटमा पुगेको थियो । टोलीले गौरस्थित सेनाको गणमा स्थानीय प्रशासनसँग जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे छलफल गरे पनि आसपासमै रहेका पीडितहरुसँग भने भेट गर्ने तत्परता नै देखाएनन् । बाढी र डुबानले के कति क्षति भयो ?, पीडितहरुको अवस्था कस्तो छ ?, जिल्लास्तरमा भएका राहत तथा उद्धार कति प्रभावकारी छ ? तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के के हुन् ? जस्ता विविध परिस्थितिबारे टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने थियो । तर, जम्बो टोलीको यस्तो संवेदनाहीन व्यवहारले पीडितहरु आहत बन्न पुगे ।
विपद्ले निम्त्याएको यो विषम परिस्थितिमा जिल्लाका अधिकारीसँग मात्रै वस्तुस्थिति बुझेर फर्किनु थियो भने सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर हेलिकप्टर सयर गर्नुको औचित्य के रह्यो ? पीडितहरुले प्रश्न उठाएका छन् । पीडितहरुले सरकारी उच्चस्तरीय टोलीबाट दुःखको समयमा सान्त्वना र सहयोगको प्रतिबद्धता खोजेका हुन्छन् । मन्त्रीहरुले सेनाको गणमा बसेर जनताले भोगेका पीडा अनुभूत गर्न सक्दैनन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांग, सुत्केरी, बिरामीहरुले भोग्नुपरेको समस्याको मापन पनि हुन सक्दैन । बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रको समस्या सुन्नकै लागि हेलिकप्टर नै चढ्नुपर्ने थिएन । सरकारी अधिकारीमार्फत् नै प्रभावितहरुको समस्या एक÷एक रिपोर्टिङ भइरहेकै थियो । सरकारी उच्चस्तरीय टोली राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा गएको पनि होइन । राहत तथा उद्धारका विवरणहरु पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयमा आइरहेकै थियो । मन्त्रीहरु हरेक स्थानीय तहमा पुग्न सम्भव नहोला । तर, सम्बन्धित तहका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नचाहिँ अवश्य सकिने थियो । स्थलगत निरीक्षण गरिएका स्थानका जनतासँग भेट गरी उनीहरुका समस्या बुझ्ने र पीडितहरुका घाउमा मलम लगाउने काम गर्न सकेको भए मन्त्रीहरु जिम्मेवार रहेको ठहर्ने थियो । र, जनताले मन्त्रीहरु संवेदनशील रहेको अनुभूत गर्ने थिए ।